Johane Chitsauko 04. Chiratidzo chaMessiasi chakaratidzwa kuvaSamaria
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 04. Chiratidzo chaMessiasi chakaratidzwa kuvaSamaria
Johane Chitsauko 04. Chiratidzo chaMessiasi chakaratidzwa kuvaSamaria
Johane Chitsauko 4:1 Zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarise vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubapatidza vadzidzi vakawanda kupfuvura Johane.
VaFarise vaive vatora nechisimba zvinzvimbo zvekuti vatonge muTembere. Murairo waMosesi hauna kubvira wataura pamusoro pevaFarise. Vanhu vasina maturo ndivo vanotsvaga Mwari pamusoro pevamwe, nekuti vanhu vane chiremera vakabatikana kwazvo nemabasa ekutsvaga zvinzvimbo zvesimba. Jesu aiziva zvaifungwa nevaFarise vaive muTembere nezvavaitaura nezvazvo. Ndizvo zviri vakuru vezvitendero, vaingokoshesa simba ravo uye kuita mari. Chinamato chemuTembere chaive chava bhizimisi guru. Vaive vasingakwanisi kusiya kugarika kwavo kuchiiswa panjodzi nemuparidzi murombo, aingotenderera akaita saJesu.
Jesu, ari Messiasi, aikwanisa kuziva zvaive mundangariro dzevanhu. Ichi chaive chiratidzo chaMessiasi.
I MADZIMAMBO 8:39 (nokuti imi, imi moga, ndimi munoziva moyo yavana vavanhu vose.)
Mwari ega ndiye anoziva ndangariro dzedu vanhu. Messiasi aive “Mwari unesu” -- Emanueri. Munhu anogona kuziva ndangariro dzevanhu.
VaFarise vaive maJuda vaifambisa zvinhu muTembere muJerusarema, muJudea, yaive nyika yemusha wemaJuda.
Jesu aive asina mbiri pakati pevatungamiri vezitendero vemuTembere. Jesu haana kubvira ataura chero chinhu chakanaka pamusoro pevanyori nevaFarise, asi aigarovadaidza kuti vanyengeri. Kana zviri ndizvo zvaitsanangurwa naJesu pamusoro pevatungamiri vezvitendero paKuuya kwake kwekutanga, achataurawo kuti kudii pamusoro pevatungamiri vemakereke paKuuya kwake kwechipiri? Saka Jesu aive asingadiwi muJerusarema, raive guta guru rekutenda kwemaJuda.
MaJuda aigarawo muGarerea makatangira Jesu kudana vadzidzi vake. Jesu aive atanga kare kuratidzira zviratidzo zvaMessiasi muGarerea kuna Natanaeri, muJuda, kupfurikidza kumuzivisa zvaaifunga mumoyo make. Jesu aiziva kuti aive munhu akaita sei, uye kuti aive amboripi asati ava paaive musi iwoyo nevaaive ataura navo, chero vaive vasina kubvira vasangana.
JOHANE 1:49 Natanaeri akamupindura akati: Rabi, ndimi Mwanakomana waMwari; ndimi Ishe waIsraeri.
Kuziva mifungo yendangariro dzake hunhu hwake uye kwaaive ambori nezvaaive amboita zvakaita kuti Natanaeri, muJuda, azive kuti aive Messiasi wake.
Asi Jesu aive asingafadzwi nendangariro dzevaFarise vaive muTembere. Vaive veramba Johane Mubapatidzi, vakasiya Johane nekuti vaitya vanhu vaiti Johane aive muprofita.
MARKO 11:30 Rubapatidzo rwaJohane rwakabva kudenga here kana kuvanhu? Ndipindurei,
31 Vakataurirana, vachiti: Kana tikati, kudenga, uchati: Makagoregerei kumutenda?
32 Asi tingati, kuvanhu, here? Vakanga vachitya vanhu vazhinji, nokuti vose vakanga vachiti Johane muporofita zvirokwazvo.
Asi Jesu aive adzingawo vaiita mari muTembere, kubva ipapo vaFarise vakabva vamuvenga. Mukapindira nekukanganisa nzira inowanikwa mari nayo nemutungamiri wechitendero munozviwanira kuvengwa kukuru. Asi Jesu aive asingafadzwi nehupfumi zvachose.
Saka Jesu aiziva kuti vaFarise vaive vamurambawo, kunyanya sezvo aive abudirira kwazvo kudarika Johane. Zvakaoma kwazvo kushandira munzvimbo maunenge wakavengwa nevatungamiri vezvitendero. Vanhu vanoterera vatungamiri vezvitendero zvavo vasati vaterera kuBhaibheri. Totenda vatungamiri vemakereke edu anhasi, maKristu mazhinji anoziva zvishoma kwazvo pamusoro peBhaibheri.
JOHANE 4:2 (kunyange Jesu wakanga asingabapatidzi amene, asi vadzidzi vake),
Jesu haana kubvira abapatidza munhu. Rubapatidzo rwaingovepo kunongedzera rufu rwake rwaizouya, kuvigwa nekumuka kwake kubva kuvakafa. Vatungamiri vezvitendero vanokoshesa kubapatidza vanhu vanenge vatendeuka kuti varatidze kukosha kwavo uye simba ravo. Jesu haana kubvira ashandisa nzira iyi.
JOHANE 4:3 Akabva Judea, akaenda zveGarirea.
Saka pachinzvimbo chekugara achidzikatira hushumiri hwaJohane Mubapatidzi aishandira pakati pevaJuda muJudea, Jesu akasarudza kuenda kumaJuda aive kuGareri. Tichiwedzera hupikisi hwevaFarise hwaizoita kuti zviomere maJuda aive muJudea kuti vamuterere. Kana pasita akamhura munhu, kereke yese inobva yamhura munhu iyeye. Mukereke yanhasi, vanhu vanobatira mweya wapasita wavo, zvinovaita vaKristu vechinzimbo chechipiri. Kunyange yaive iri nguva yepakati pemwaka wechando kusingafambiki nzendo refu nekuda kwechando chakanyanya, Jesu akabuda akatanga rwendo rurefu achienda Garerea. Kuterera kuda kwaMwari kunoda kuzvipira kukuru.
Asi pakati peJudea neGarerea paive neSamaria.
JOHANE 4:4 Wakanga achifanira kupfuvura neSamaria.
VaSamaria vaive musanganiswa wemaJuda nevaHedeni nekuda kwewanano. MaJuda chaiwo ekutanga emuSamaria vaive vaenda muhutapwa pasi pevaAsiria, havana kuzodzoka nekuti vainamata mhuru dzendarama mumaguta eBeteri neDani. Vaive varamba kunamata kwechokwadi kwemuTembere muJerusarema. Pese pavaienda muhupoteri vaibva vanyangarika kubva munhorondo. Chinamato chenhema hachigoni kudzosa vanhu kuchokwadi.
Hushe hwevaAsiria hwakatangira munzvimbo dzine ruvara rutsvuku mumepu inotevera, dzikazokura kupinda munzvimbo dzine ruvara rwegirini. Izvi zvaisanganisira zvidimbu zveyero zvaive zveIsraeri. MaJuda mashoma vakasara vari muzvidimbu zveyero zveIsraeri vakarorana nemaHedeni vakaendeswa munzvimbo idzi nevaAsiria. Nzvimbo dzine ruvara rweyero idzi dzakatanga kuzivikanwa dzichidaidzwa kuti Samaria wanano pakati pemaJuda nemaHedeni dzakaburitsa vanhu vaidaidzwa kuti vaSamaria.
Ruvara rwevhayoreti rwakaita kunge pepo rweJudea runoratidzwa pasi peruvara rweyero rwenzvimbo yeIsraeri. VaAsiria havana kubvira vatapa Judea.
Saka asiya Jerusarema, Jesu akatanga kusvika muguta reSychari muSamaria.
JOHANE 4:5 Zvino akasvika paguta reSamaria, rainzi Sikari, pedo nenyika yakanga yapa Jakobo mwanakomana wake Josefa.
JOHANE 4:6 Tsime raJakobo rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba, ndokungogara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu.
Sikari mudzi wechiHeberu weAramaiki zvinoreva kuti “kunyaradzwa”. Mugodhi waive tsime remvura yepanyika, asi vaSamaria vaive vakanyaradzwa kana kupfigirwa kubva kutsime rechokwadi remvura dzemweya rinova Mweya Mutsvene.
Sikari raive pakati pemakomo maviri ane mbiri apo Joshua akamira akataura makomborero pamusoro pemaJuda ekubatira Mwari uye kutukwa kwekuramba Mwari. Apa ndipo pakafamba Jushua kuti akunde kutora nyika yechipikirwa panyama. Joshua aive akasimba, akagwinya paakamira paSikari. Asi Jesu aive aneta akasvikogara pasi. Haana kuratidzika semukundi akagwinya. Asi aive pakufamba kwemweya kwakadzama kwazvo, kuti anokunda zvivi, gehena neguva. Aizokunda zvakare nyika neEvangeri rake mukati memakore 2000 enhorondo yenguva nomwe dzekereke.
Gomo Ebari riri kumusoro kweSikari negomo Gerizimi riri kuzasi kweSikari akaitwa nekuda kwezvitendero zvenhema.
Gerizimi raive tsime remakomborero kune avo vanoterera Mwari nekutenda zvakanyorwa muBhaibheri chete.
Nyika yevaSamaria yaive yambotapwa nevaAsiria vakagara mairi. Kutukwa uku kwaive kwakonzereswa nekunamatwa kwemhuru dzendarama dzaive dzamiswa paDani nepaBeteri.
Zvino Jesu, pahuvepo hwegomo Gerizimi aizopa vaSamaria makomborero ehupenyu husingaperi hunokwanisa chete kupihwa neMweya Mutsvene.
JOHANE 4:7 Zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari: Ndipeivo, ndimwe.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Kereke yechokwadi ndiyo mwenga waKristu.
Nemukadzi uyu Jesu acharatidzira zano rake kumakore 2000 enhorondo yekereke. Ndiro zano rake rakadzama kwazvo. Aive mukadzi mutadzi, asi izvi zvinoratidza kuti munhorondo yekereke Mwari achaponesa vatadzi.
JOHANE 4:8 Nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kundotenga zvokudya.
Vadzidzi vakaisa kukosha pane zvenyama, apo Jesu aikoshesa zveMweya. Isu maKristu tinoita kutadza kumwechete uku nekutsvaga kupfuma kwedu pekutanga pachinzvimbo chekuda kwaMwari.
JOHANE 4:9 Ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari: Ko iwe muJuda, unokumbira seiko kwandiri kumwa, ini mukadzi muSamaria? (Nokuti vaJuda havafambidzani navaSamaria).
Kurwisana kwemarudzi nekusarudzana kwemarudzi – kuvenga mamwe marudzi kwakagara kuriko kwenguva refu. MuJuda aisafanira kutaura nemuSamaria. Murume haaifanira kutaura nemukadzi mutorwa. Jesu akaparadza zviera-era zvese izvi kuti aratidze kuti Mwari ari kuda munhu wese, zvisinei nekuti ndiyani.
JOHANE 4:10 Jesu akapindura, akati kwaari: Dai waiziva chipo chaMwari, vuye kuti ndiani unoti kwauri, ndipei vo ndimwe, ungadai waikumbira kwaari, akakupa mvura mhenyu.
Mukadzi aiona Munhu wenyama Jesu. Aive asingaone Mwari Wemasimbaose aive akavanzwa mukati maJesu.
Messiasi zvinoreva kuti Mwari achifamba panyika mumuviri wemunhu.
JOHANE 4:11 Mukadzi akati kwaari: Ishe, hamuna chamungachera nacho, tsime rakadzika, zvino mvura mhenyu mungaiwanepiko?
Mukadzi, sekereke yanhasi inotora huwandu hwevanhu mukereke nemari yavabvisa yezvipo sehumbowo hwemakomborero aMwari, haigoni kuona zviri kusi kwemeso edu enyama.
JOHANE 4:12 Ko muri mukuru kuna baba vedu Jakobo, vakatipa tsime iri, vakamwa pariri vamene navanakomana vavo nezvipfuwo zvavo here?
Jakobo aive munhu airemekedzwa sezvo aive tateguru akapa zita rake Israeri kunyika yake. Jesu angava mukuru kuna Jakobo here? Mhinduro yaive “Hongu” mukuru kwazvo.
Jakobo akapa mvura kuvana vake munzvimbo dzakawoma kupfurikidza kuchera mugodhi wakadzika kwazvo. Jesu aizochera zvakadzika zvakanyanya kumudarika achitakura zvivi zvedu kupinda mugehena, onozvirasira pana Diaborosi ndiye baba vezvivi, saka nekudaro anobva atisunungura kubva pakufanira kuripira zvivi zvedu mugehena. Jesu aizochera zvakadzika mukati kati memoyo yevana vake vaive munzvimbo yemweya yakaipa, kuti avazadze nemvura dzinorarama dzeMweya Mutsvene.
JOHANE 4:13 Jesu akapindura, akati kwaari: Mumwe nomumwe, unomwa mvura iyi, uchava nenyota zve.
JOHANE 4:14 Asi aninani, unomwa mvura yandichamupa ini, haachazovi nenyota nokusingaperi asi mvura, yandichamupa, ichava mukati make tsime remvura, inovhaira kusvika kuvupenyu bwusingaperi.
Mhuru dzendarama dzekuSamaria, nezvimwe zviumbwa zvese zvainamatwa, zvaida kuti vanhu vazvitarisire vazvichengetedze. Vanonamata zvifananidzo ndivo vanhu vanofanira kugara vachichengetedza vamwari vavo. Jesu aivapa Mwari weMweya, aizopinda mumunhu omuchengeta nekumutarisira. Mwari achichengetedza munhu chinhu chiri nani kwazvo pane munhu achichengetedza mwari.
JOHANE 4:15 Mukadzi akati kwaari: Ishe, ndipei mvura iyi, kuti ndirege kuzova nenyota, kana kuvuya kuchera pano.
Mukadzi akadakadzwa nazvo akatanga kuda mvura inorarama iyi. Asi aida chitendero chaaizozviwanira zvinomuitira iye pachake. Aifanira kufamba rwendo rurefu kunochera mvura oitakura kudzoka kumba. Chitendero chitsva ichi chaizomubatsira sezvo aisazofamba kuenda nekudzoka kutsime zuva nezuva. Aive achitungamirirwa nechinangwa chakaipa chekuda kuzviwanira iye pachake.
Kazhinji tinobatira Mwari, asi zvinangwa zvedu zvemukati memoyo zvechokwadi hazvisi rudo rwedu naMwari chete, asi rudo rwekuzviwanira pfuma. Izvi zvinoisa hukama husina kusimba pakati pedu naMwari.
Jobo ane hunhu huri nani kwazvo kana akatarisana naMwari wake.
JOBO 13:15 Kunyange akandiuraya hake, ndichamumirira hangu;
NaMambo Davidiwo zvakare, akaramba kubatira Mwari kana zvisina chaaiisa kwazviri. Akanga apihwa buriro nenzombe yechibairo zvemahara. Asi akaramba akati anoda kuripira kuti azvishandise.
Ndipo paifanira kuvakwa Tembere.
II SAMUERI 24:24 Mambo akati kuna Arauna, "Kwete, ndichazvitenga kwauri zvirokwazvo nomutengo wazvo, uye handingabayiri JEHOVA Mwari wangu zvipiriso, zvandisina kutenga." Naizvozvo Davidi akatenga buriro nenzombe namashekeri esirivha ana makumi mashanu.
JOHANE 4:16 Jesu akati kwaari: Enda, undodana murume wako, ugovuya pano.
Jesu aifanira kumushandura mafungiro ake. Aida chitendero chaizomuita kuti asaite mabasa mazhinji. Saka Jesu akamuudza kuti aende kumba kunotora murume wake.
JOHANE 4:17 Mukadzi akapindura, akati kwaari: Handino murume. Jesu akati kwaari: Wareva zvakanaka, zvawati: Handino murume.
JOHANE 4:18 Nokuti watova navarume vashanu; uyo, waunaye zvino, haazi murume wako; apo wareva zvokwadi.
Jesu akataura kuti aive aroorwa kashanu kare uye apa aive akungogarawo nemunhurume.
Zvingaitike sei kuti pano panyika mutorwa akaneta zvake azive zvese zvakadaro pamusoro pake?
Pakarepo pfungwa dzake dzakava pamusoro-soro. Jesu uyu aifanira kuva ari muProfita waMwari. Munhu anotaura naMwari.
JOHANE 4:19 Mukadzi akati kwaari: Ishe, ndinovona kuti muri muporofita.
JOHANE 4:20 Madzibaba edu ainamata pagomo iri; imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa.
VaSamaria vaive vakarambwa nemaJuda vainamata muTembere muJerusarema. Saka vaSamaria vainamatira mugomo Gerizimi. Vaive vashandura gomo kuriita nzvimbo yavo yekunamatira.
Mukadzi haana kuziva kuti vanyori navaFarise muJerusarema vaive varamba Jesu.
JOHANE 4:21 Jesu akati kwaari: Mai, nditende kuti nguva inovuya, yamusingazonamati Baba pagomo iri, kana paJerusarema.
Jesu akamuyambira kuti musi mutsva waiuya apo Mwari aizovaka Tembere yake mumoyo yevanhurume nevanhukadzi. Mweya Mutsvene uchirarama mumoyo wemunhu akatendeuka chinenge chiri chigaro chaMwari chehushe panyika.
Ndiko kushanda kunozoita Mwari mukati menguva nomwe dzekereke.
JOHANE 4:22 Imi munonamata chamusingazivi; isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJuda.
Jesu akatsanangura kuti kunamata kwemaSamaria kwaive kutambisa nguva sezvo vaive vazviitira murairo yavo vakazviitira gomo ravo nzvimbo yekunamatira. Mwari haafadzwi nemazano evanhu netsika dzavo.
Zano reruponeso raive pamusoro pemaJuda. Vaifanira kuroverera Messiasi seGwaiana rechokwadi repaseka kuitira kuti Jesu akunde zvivi nerufu.
Tsika dzekereke dzaizodzikisira chokwadi. Hatina kubvira tanzi tipembere kuzvarwa kwaJesu. 25 Zvita raive zuva rekuzvarwa kwamwari weRoma wezuva. Jeremia chitsauko 10 anoti hatifaniri kushongedza miti yakamiswa. Kisimusi izwi risimo muMagwaro. Saka tiri kukanganisa kwazvo, asi toti ndiwo mutambo mukuru wekereke pagore rese.
Makereke anoita chidyo, chirayiro chaShe, mangwanani. Asi hachina kubvira chakadanwa kunzi chisvusvuro chemangwanani.
Saka vakawanda vanoshandura Magwaro, Jesu anoti nzira iyi yekunamata, kunyangwe ichiitwa nemoyo wese nekuzvipira, kutambisa nguva.
JOHANE 4:23 Asi nguva inovuya, nazvino yatovapo, yokuti vashumiri vazvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi; nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene rwakatanga kuburuka musi wePentekosti rakazivisa zvikamu zvitatu zveMweya: kutendeuka kuti vanhu vaponeswe kugehena, hutsvene, uye kutenda mukubata kweMweya unoshamisa nekuzviratidza kweMweya Mutsvene.
Mwari haasi Munhu wezvinhu. Saka zvaanokoshesa zvizhinji ndezvemweya. Mwari anotarisira kuti tizive chokwadi cheMagwaro akanyorwa. Kusaziva kana kushaiwa shungu nekuziva mamwe Magwaro hakumufadzi.
Kutaura kuti mune zvakakanganiswa muBhaibheri reKing James Vhezheni humbowo hwekuti munhu iyeye haana kuzadzwa neMweya.
JOHANE 16:13 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose
Humbowo hwerubapatidzo rweMweya Mutsvene kugona kwedu kunzwisisa Shoko raMwari rakanyorwa.
JOHANE 4:25 Zvino mukadzi akati kwaari: Ndinoziva kuti Mesiasi unovuya, unonzi Kristu; kana iye asvika, uchativudza zvose.
Mukadzi aiziva kuti kuna Messiasi achauya, uye kuti Messiasi aizoziva zvakavanzika zvemoyo yevanhu.
JOHANE 4:26 Jesu akati kwaari: Ini, ndinotaura newe, ndini iye.
Natanaeri muJuda pakarepo akaziva Jesu saMwari mumuviri wenyama apo Jesu akamuudza zvaaifunga nezvaaive amboita.
Mukadzi muSamaria akatora nguva refu kuti asvike pakuziva izvi. Asi Jesu paakamuudza kuti aive ani, pakarepo akaona chiedza.
JOHANE 4:27 Zvino vadzidzi vake vakasvika, vakashamiswa vachivona kuti unotaurirana nomukadzi; kunyange zvakadaro hakuno mumwe wakati: Munotsvakeiko? Kana: Munotaurireiko naye?
Vadzidzi vakadzokawo vakabva vatapwa muzvinhu zvenyama, vachizvibvunza kuti nei munhurume wechiJuda achitaura nemukadzi muSamaria. Vakatadza kuziva zvaiitika muchamweya apo ndangariro dzake dzakazarurwa kuchokwadi chakadzama.
Asi Mweya waMwari waive uchitonga zvakazara ukamisa vadzidzi kumutongesa. Mweya wakabva wamisa vadzidzi kubvunza Jesu aitaura nemukadzi mutorwa uyu. Chero kupindira kwaizoitwa nevadzidzi kwaizokanganisa saka Mwari akavaita kuti varambe vanyerere.
JOHANE 4:28 Ipapo mukadzi akasiya chirongo chake, akaenda muguta, akati kuvanhu:
Mvura inotaura pamusoro pedzidziso.
Mukadzi (mucherechedzo wekereke) aive nechirongo chake chezvaaitenda zvaaive adzidziswa nevakuru vake vezvitendero. Paakasangana naJesu, Shoko rechokwadi, akabva arasa dzidziso dzese dzaaive ambosangana nadzo.
Chipingaidzo chikuru kubva pakuona chokwadi cheBhaibheri ndipo vanhu vanoedza kuramba vakabatirira pazvitendero zvavo vega.
Zvino akabva adzokera muguta akanoita chinhu chisina kubvira chanzwikwa, akanotaura nevarume.
JOHANE 4:29 Vuyai muvone munhu, wakandivudza zvose zvandakaita. Ko uyu handiti ndiye Kristu here?
Munhu uyu aive aburitsa pachena zvakadarika nezvaitoitika muhupenyu hwake. Varume vashanu vakafa, achirarama newechitanhatu. Pakupedzisira akazosangana neChokwadi. Aive asisina kusungwa kumurume wake pakuchengetedzeka kwenyika ino kana pakurwirwa. Aive asisanzwi akasungirirwa “kukereke” yaaienda kwairi. Aive asangana naJesu, izvi zvakamuisa munzira itsva apo aive atanga kukoshesa kuchengetedzeka kusingagumi, chero aizotambudzika muhupenyu huno.
Pakarepo kuda kwaMwari kwakabva kwakosha kwaari kuti kumuitire, kumuchengetedze, kuve kuda kwake.
Jesu aishandisa zviitiko zvepanzvimbo iyoyo kuzviita micherechedzo yechokwadi chakadzama chaizoronda nhorondo yenguva nomwe dzemakereke.
Kereke zvino yava munguva yechinomwe. Nguva tanhatu dzekereke dzaive dzadarika uye ipapo, nezaruriro yeZvisimbiso zvinomwe nemutumwa kana nhume yechinomwe, tiri pachinzvimbo apo Mweya waMwari unotitungamirira mukunzwisisa kwakazara kwezvakavanzika zveShoko rakanyorwa. Pakupedzisira tinokwanisa kutanga kunzwisisa zvakanyorwa muMagwaro.
Zvino nekuti nguva tanhatu dzekereke dzakadarika, Kristu Shoko rakaziviswa anotaura nesu paaitaura nemukadzi.
JOHANE 4:30 Vakabuda muguta, vakaenda kwaari.
Aya maonero eMweya. Vaifanira kubuda kubva kwavaigara kuti vasangane naJesu.
Munguva yechinomwe Jesu akamira kunze kwemukova wekereke achigogodza.
Jesu anoonekwa kumunhu mumwe nemumwe mukereke, kwete kukereke yese seboka.
Kuraira kwake kwatiri ndekwekuti kudii?
Tinofanira kubuda muzvirongwa zvemasangano ezvitendero zviri kutisunga kuti tifuratire zvakawanda zveBhaibheri, nekuti mapasita ari kutitungamirira haazivi zvakare zvakawanda zvinorehwa nemavhesi mazhinji. Kubuda mukusaziva nekukanganisa kwemakereke ndiyo kiyi yekusangana nechokwadi cheMagwaro.
JOHANE 4:31 Nenguva iyo vadzidzi vake vakafanomunyengetera, vachiti: Rabhi, chidyai.
Vadzidzi vake vakashanda mashandiro enyama zvakare. Vaive nemari yekutenga chikafu saka vakafunga kuti zvinhu zvese zvaive zvakanaka.
Vanhu vanoenda kumakereke nhasi vanofunga nenzira imwechete. Chero Mwari akange achivapa zvavanoda zvenyama, vanofunga kuti zvinhu zvese zvakanaka.
JOHANE 4:32 Iye akati kwavari: Ini ndine zvokudya, zvandinodya, zvamusingazivi,
Jesu aive achikoshesa zvinhu zvenzvimbo yepamusoro-soro. Nyama yemweya inogutsa mweya ndiyo dzidziso dzeMagwaro.
Vanoenda kumakereke havagoni kutsenga nyama yemweya yechokwadi. Havagoni kunzwisisa dzidziso yakadzama. Vabvunzei kuti nei Jesu akanyora muvhu ruviri nemunwe wake vanhu pavaida kutaka mukadzi akabatwa muhupombwe, vanongobwaira, nezviso zvisina kana gwara reruzivo rwezvakaitika. Asi vanoti vane ndangariro dzaKristu. Asi havana ruzivo rwekuti Kristu aiitei. Saka vanenge vachingozvinyengera zvavo.
JOHANE 4:33 Zvino vadzidzi vakataurirana, vachiti: Kasi mumwe wamuvigira zvokudya kanhi?
Zvakare vadzidzi vakatarisira pasi muono wemweya munguva inouya yekereke, zvekuti havana kugona kufunga, kudzoka pane zvenyama. Sevanhu “vanoenda kukereke” vanoedza kufuratira zvinhu zvakadzama. Eva akadya muchero akarangwa nekuzvara vana? Ichokwadi here? Vanongokutarisai neziso ravo rekusaziva kwakazara vodzinga kana kufuratira munhu anenge abvunza mubvunzo. Nei Adamu naEva vakadya muchero mumwechete asi vakapihwa mirango yakasiyana? Nei Mwari akaranga Eva nekuzvara vana asi uri murango waisagona kuti agovane naAdamu? Zvakare vanoenda kukereke vanokutarisa nekusaziva asi vanoti vane ndangariro dzaKristu, asi vasinganzwisisi zvakanyorwa muBhaibheri.
JOHANE 4:34 Jesu akati kwavari: Zvokudya zvangu ndizvo, kuti ndiite kuda kwowakandituma, nokupedza basa rake.
Mwari ane zano guru kuzuva redu. Ndizvo zvatinofanira kukoshesa. Hatifaniri kuzadzwa nerudo rwedu rwekuita zvinhu zvizhinji, hwaro humwechete hwaishanda huri vadzidzi vaJesu. Mwari aive azivisa chakavanzika cheZvisimbiso zvinomwe, izvi zvinofanira kutigonesa kunzwisisa Magwaro kuti tigadzirire kumuka kwevakafa nekuita chokwadi chekuti tiri kutenda mune zvakatendwa mazviri nekereke yekutanga.
Ndiko kuda kwaMwari kukuru kunguva yedu. Mwari anoda kuti tizadzise Muono wake Mukuru, tomusiira kuti atarisane nezvinhu zviduku zvekurarama kwedu kwenyama panyika pano. Asi tinozviita nenzira yakaipa nekutarisana nezvinhu zvedu zvenyama zvepasi rino, tichifuratira Magwaro atisingagoni kutsanangura. Izvi zvinotipedzera nguva nesimba. Tinoda Evangeri rebudiriro rinoita kuti hupenyu hwedu hutiitire uye tidekare. Nekudaro tinobva takwanisa kuzvitutumadza pamusoro pebudiriro yedu nekuva maKristu akanaka nekuti takapfuma. Kunyangwe zvazvo Jesu akati zvakaoma kuti vapfumi vapinde denga. Kana tisinganzwisisi zvidimbu zvakawanda zveBhaibheri, zvine basa rei? Saka tinozvinyengera. Tinobva tazvipupurira. Vanhu vanotsanangura zvakangwara nei tisingafaniri kunzwisisa Magwaro ese. Nei Rugwaro “rusina maturo”. Kuzvipupurira uku kunobva kwaonekwa sebudiriro yakawanikwa. Hazvichashamisi kuti nei Jesu amire kunze kwemusuwo wekereke.
MATEO 6:33 Asi tangai kutsvaka vushe hwaMwari nokururama kwake, izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri
Tinofanira kutanga tanzwisisa Magwaro. Tosiya Mwari atarisire hupenyu hwedu hwenyama.
Zvino Jesu anotaura pamusoro pechokwadi chakadzama kwazvo.
JOHANE 4:35 Ko imi hamuti: Kwasara mwedzi mina, kucheka kwasvika? Tarirai, ini ndinoti kwamuri: Simudzai meso enyu, vonai minda, kuti yatoibvira kucheka.
Mitambo mikuru mitatu yevaIsraeri yese umwe neumwe wayo unoyanana nekukohwa kwakasiyana. Bari rinoibva nguva yePaseka; gorosi rinoibva nguva yakapoteredza Pentekositi; uye mizambiringa nguva dzakapoteredza nguva yemutambo wematumba.
Gorosi nebari zvinokushwa muna Mbudzi zvokura munguva yechando inonaya. Kukohwehwa kwebari kunotanga nguva iri pakati paKubvumbi. Ndiyo nguva yePaseka.
Jesu aitaura pakati penguva yechando. Pakati pemwedzi waZvita kusvika muna Ndira (mwedzi mumwechete) kusvika patati paKukadzi (mwedzi miviri) kusvika pakati paKurume (mwedzi mitatu) kusvika pakati paKubvumbi (mwedzi mina uye kukohwa kwaizotanga nguva yakapoteredza mutambo wePaseka).
Tarirai, kunyange paive pakati penguva yechando, Jesu haana kutaura pamusoro pemhemberero dzekuzvarwa kwemunhu. Hatina kubvira tanzi tipemberere kuzvarwa kwake. Bhaibheri harina kubvira rataura pamusoro pezuva 25 Zvita. Izuva remhemberero dzechipegani dzavanopemberera kuzvarwa kwamwari wavo wezuva.
Asi goho remweya raive ratoibva kare sezvo Messiasi aive auya kuzozadzisa chiprofita ichi, uye kana maJuda nemaSamaria vaive vakagadzirira kumugamuchira, chiuru chemakore erugare aizogadzwa seHushe hwaMwari panyika, apo maJuda anotonga nyika.
Asi Jesu aiziva kuti izvi zvaisazoitika nekuti maJuda aizomuramba.
Goho ndeapo mbeu dzinobviswa padavi radzakaberekwa.
Kunyange zvakadaro, zvisinei nekuti maJuda vakamuramba, vatsvene veTestamente Yekare vaizobviswa mumakuva avo murumuko rwaizoitika mumashure mekumuka kwake kubva kuvakafa.
MATEO 27:53 Vakabuda pamabwiro iye amuka vakapinda muguta dzvene. Vakavonekwa navazhinji
Saka goho reTestamente Yekare ndeapo vatsvene ava vakamutswa kubva kumakuva, vakabviswa panyika naJesu pazuva raakakwira kuDenga achikwira pamwe navo (segore rezvapupu).
Zvino Jesu akatarira munguva inouya kugoho guru pakupera kwenguva dzemakereke.
Uku kwaive kukohwa kwechipo. Nekuti maJuda vaive varamba Messiasi, Mwari akabva agona kutendeukira kumaHedeni kuti avaponese.
Goho ndeapo mbeu dzinobviswa pamuti nevakohwi. Pakupera kwenguva yekereke yechinomwe vatsvene vakafa kubva munguva nomwe dzekereke vachamutswa kubva kuvakafa, nevatendi vose vechokwadi vachabviswa panyika kuti vanosangana naShe mumakore.
JOHANE 4:36 Unocheka unopiwa mubairo, unovunganidza zvibereko muvupenyu bwusingaperi; kuti unokusha nounocheka vafare vose.
Jesu anosvika panyaya chaiyo. Vaya vanozadzisa basa raMwari panyika vanozviwanira hupenyu husingagumi. Ndiwo mugove wechokwadi. Tingatambure kurutivi runo, asi mugove wedu ndewenekusingagumi.
Zvakare, Jesu anoisa kukosha pazvikamu zviviri zvekukura kwembesa: kukusha munguva yekereke yekutanga, nekukohwa munguva yekereke yechinomwe.
Parumuko vatsvene venguva yekereke yekutanga vachafara pamwe nevatsvene venguva yekereke yechinomwe vanenge vadzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga. Zvino Jesu akabva azivisa chinhu chakadzama: nguva nomwe dzemakereke dzakamiririrwa nemucherechedzo wekudyara mbeu yekutanga. Mbeu inodyarwa yovigwa muvhu, zvino mbeu inokura nezvikamu zvakasiyana kuita muti unobuda mashizha nemaruva neganda rakaputira mbeu. Pakupedzisira mbeu inoibva kuti ikohwewe kana yafanana nembeu yakadyarwa.
Chinhu chikuru ndeichi. Mbeu inokohwewa yakafanana nembeu yakadyarwa.
Jesu ndiye Arfa naOmega, wekutanga nowekupedzisira. Ndiye muKushi neMukohwi.
Nguva yekereke yekutanga yakakusha Mbeu yeShoko raMwari yeChokwadi parakanyorwa nemapostora. Chokwadi ichi chakabva charasika chikavigwa mutsvina yeNguva yeRima. Rumutsiridzo rwaLuther rwaive mashizha achitungira. John Wesley aiparidza hutsvene nekuparidzira, zvakatungamirira kusvika kunguva yemamishinari uko Evangeri rakapararira nepasi rese. Mugore 1906 vhuserere yePentekositi yakadzosera zvipo zvemweya unoshamisa sechibereko chakangofanana nembeu, asi isina chinhu sezvo kwaive neMagwaro akawanda avaive vasingagoni kutsanangura. Muna 1963 chakavanzika cheZvisimbiso zvinomwe chakaziviswa kuitira kuti nguva yekupedzisira idzokere pakunonzwisisa zvakavanzika zvaMwari sekunzwisiswa kwazvaiitwa nekereke yekutanga. Mbeu yeShoko raMwari yekutanga ichadzoserwa nezaruriro kuti isu vanhu tinzwisise. Zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa kana nguva yekupedzisira yakohwa kutenda kumwechete, mbeu imwechete, yakadyarwa nekereke yekutanga.
Jesu akaparidza pamusoro pevabati mumunda wemizambiringa. Mutambo weMatumba waiitwa munguva yekukohwewa kwemizambiringa. Mutambo weMatumba unomiririra chiuru chemakore erugare panyika (anowanzodaidzwa kuti mereniyamu) anoitika mumashure mehondo yeAmagedhoni. Ipapo vanhu vachavaka dzimba dzavo vogara murugare.
MATEO 20:1 Nokuti vushe hwokudenga hwakafana nomwene weimba, wakabuda mangwanani kundotsvakira munda wake wemizambiringa vabati.
2 Wakati atenderana navabati kuvapa denari* pazuva, akavatuma kumunda wake wemizambiringa.
Denari rinomiririra rubapatidzo rweMweya Mutsvene runovapa nzvimbo muhushe hwemakore chiuru hunouya. Vabati vekutanga ava vanomiririra maKristu munguva yekereke yekutanga.
MATEO 20:9 Zvino nenguva inenge yegumi neimwe vakati vachivuya, mumwe nomumwe akapiwa dhenari.*
10 Vokutanga vakati vachivuya, vakati vachapiwa nokupfuvura; ivo vakapiwa avo mumwe nomumwe dhenari.*
12 Vakati: Ava vokupedzisira, vakabata nguva imwe chete, mavaenzanisa nesu, takatambudzika zuva rose, tichipiswa nezuva.
14 Tora zvako, uende, ndinoda kupa wokupedzisira sewe.
Vabati vekupedzisira vanomiririra maKristu vari munguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia.
Mumufananidzo kukosha kukuru kwakaiswa panguva yekutanga nenguva yekupedzisira vose vachiwana mugove wakafanana. Rubapatidzo rweMweya Mutsvene rumwechete runozozivisa chokwadi chenguva yekereke yekutanga kunguva yekereke yekupedzisira. Vana munguva yekereke yechinomwe vanodzoserwa pakutenda dzidziso dzevapostora dzenguva yekereke yekutanga.
MATEO 20:16 Saizvozvo vokupedzisira vachava, vokutanga novokutanga vachava vokupedzisira.
Hapafaniri kuva nemusiyano pakati penguva yekereke yekutanga nenguva yekereke yekupedzisira.
Mwari anodana vazhinji kuti vatevere Magwaro akaziviswa, asi maKristu mazhinji vanosarudza kugara netsika dzemakereke avo uye maonero evatungamiri vemakereke avo. Vanoda kereke kudarika kuda kwavanoita Magwaro. Vanotora zvavakabata paitaura vakuru vemakereke avo sezvakakosha kudarika Magwaro. Makereke anofuratira Mwari achizivisa chokwadi chekutanga kupfurikidza Magwaro. Vanosarudza kugara netsika dzavo nezvitendero nedzidziso dzakaitwa nevanhu.
JOHANE 4:37 Nokuti shumo ndeya zvokwadi, inoti: Mumwe unokusha, mumwe achicheka.
Nguva imwechete chete ndiyo yakakusha chokwadi – nguva yekereke yekutanga. Imwe nguva ndiyo inozokohwa pakupedzisira – nguva yekereke yechinomwe. Kukohwa kubvisa mbeu kubva pamuti wadzakaberekwa. Mvura yekutanga ndiyo mvura yedzidziso inotigonesa kunzwisisa zvakavanzika zvaMwari todzoserwa pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Mvura yekupedzisira imvura yekukohwa apo vatsvene vakafa munguva nomwe dzemakereke vanobviswa mumakuva avo, vatsvene vanorarama vanoshandurwa vopihwa miviri isingavori kana kufa, vose vobviswa votorwa kubva panyika pavanokwira kudenga kunosangana naShe kumakore.
Yambiro huru kwatiri: Nguva imwechete chete yekereke ndiyo yakakusha chokwadi – nguva yekereke yekutanga. Nguva yechinomwe kana nguva yekereke yekupedzisira inofanira kukohwa mbeu yakafanana, dzidziso imwechete, yaive nenguva yekereke yekutanga.
JOHANE 4:38 Ndakakutumai kundocheka zvamusakabatira; vamwe vakabata, zvino imi mapinda pabasa ravo
Nguva yekereke yekupedzisira haina zvikonzero zvekuzvipupurira nazvo. Tinofanira kutenda chete dzidziso dzakatambudzikirwa, kushungurudzika uye kushadirwa nenguva yekereke yekutanga kuti vadziite. Madzibaba mapostora vakashanda nesimba kwazvo kuti vanyore Testamente Itsva uye kuti vatange nheyo dzekereke yekutanga vakatambudzika uye vakauraiwa kuitira kuti chokwadi chizivikanwe. Mubati weRoma Nero akatanga kuparadzwa kwemaKristu kune hutsinye kwazvo muna 64 AD. Makore akapoteredza 300 AD mubati weRoma Diocletion akatangazve kuuraiwa kwakaoma kwazvo kwemaKristu, uye kuedza kukuru kuparadza nekubvisa zvakazara Magwaro ekutanga akanyorwa nemapostora zvekuti maBhaibheri akapotsa aparadzwa ese. Zvisinei zvinyorwa zvizhinji zvaive zvaitwa, saka mamwe Magwaro akakunda kurarama. Dzimwe nguva dzese dzemakereke dzaifanira kurarama mukuomerwa kukuru uye kuuraiwa kukuru. Makumi emamiriyoni emaKristu vakaurairwa kutenda kwavo muNguva dzeRima. Vanhu vasingaverengeki vakafa nezvirwere kana kuti vakauraiwa vachiita basa raMwari. Zvakatora kutambudzika kukuru kuti tisvike patiri pano nhasi. Varume vakadzidza makumi nana nevanomwe vakaturikira Bhaibheri reKing James Vhezheni muna 1611. rakaongororwa rikadzokororwa kwemakore anoda kusvika 160 kusvikira chinyorwa chakatendwa machiri chaburitswa muna 1769. Rakazoongororwa zvakare munguva yemamishinari sezvo rakaita nheyo dzenguva yemamishinari. Saka kushanda nesimba kukuru kwaive kwaitwa kuti tive neBhaibheri rakanakisa mumaoko medu. Hatina zvimwe zvatinokwanisa kuwedzera. Bhaibheri reKing James Vhezheni ndiro Bhaibheri rakanakisa uye rakaongororwa rikaonekwa rine chokwadi chese pamaBhaibheri ese ari kushandiswa nevanhu. Hatisi kufanira kushanda pakuita rimwe Bhaibheri rine kuturikirwa kwakasiyana neuku. Hatigone kuva nerimwe Bhaibheri riri nani kudarika iri. Tinofanira kutenda mariri sezvarakanyorwa riri, toita chokwadi chekuti tinogona kunzwisisa zvakavanzika zvaro, nekuti basa redu kudzokera pakutenda zvakatendwa nemapostora pakutanga. Tingona chete kukohwa zvakakushwa nemapostora.
Tarisai mifananidzo minomwe yehushe hweDenga kuna Mateo Chitsauko 13 inomiririra nguva nomwe dzemakereke.
Mufananidzo wekutanga waive nemukushi weMbeu yeShoko yechokwadi, rakanyorwa nemapostora munguva yekereke yekutanga. Zvakanyorwa nemapostora chete ndizvo zvatinokwanisa kutenda mazviri. Shiri dzakaipa dzakaedza kuparadza mbeu iyi.
Mufananidzo wechipiri wakaona munhu achishaiwa hanya nekurarama nezvinodiwa neMagwaro munguva yekereke yechipiri, sora remaonero uye tsika dzevanhu rakapinda mukereke. Kuipa nekukanganisa uku kwaizoramba kuri mukereke, kwoziviswa chete pakupedzisira apo zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe zvinozivisa musiyano wechokwadi nekutadza kwakachenjera.
Mufananidzo wechitatu wakaona muti wemasangano uchikura zvaive zvisina kufanira, umo shiri dzakaipa (idzo mumufananidzo wekutanga dzakaedza kuparadza Mbeu) dzakagara pamapazi epamusoro ehutungamiri hwekereke. Ngwarirai hutungamiri hwevanhu mumakereke. Uku ndiko kuita kwakaipa.
Mufananidzo wechina, mufananidzo wepakati nepakati kana nguva dzepakati kana Nguva dzeRima dzakaoma mukadzi ( kereke yeRoman Catholic) ichitonga Europe. Kereke yechina yaidaidzwa kuti Tiyatira zvinoreva kuti “mukadzi anotonga”. Akaita Tiriniti yeVanhu vatatu kubva muchikafu kana Chingwa chehupenyu. Icho mbiriso yakapararira machiri kusvikira vanoenda kumakereke vakaguma vasisina zita rimwechete raMwari. Vakachinjanisa Zita raJesu Kristu nezita raBaba, Mwanakomana naMweyaMutsvene. Asi havagoni kutiudza kuti zita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene nderekuti kudii. Aya mazita ezvinzvimbo. Saka Mwari wemaKristu haasisina Zita.
Mufananidzo wechishanu wakaratidza Kristu ari paCalvari achitenga nyika, kuitira kuti Rumutsiridzo rwaMartin Luther rwakaparidza kuponeswa nekutenda kuti kuzivikwanwe nemunhu wese.
Mufananidzo wechitanhatu wakaratidza Kristu achitenga ibwe, rinomiririra musuwo weDenga. Uyu waive musuwo wakazarurwa kunguva yemamishinari.
Mufananidzo wechinomwe unoratidza rutava ruri mugungwa revanhu vazhinji nemarudzi vasina kugadzikika. Intaneti inoenda munyika dzese, uye inokwanisa kushandiswa kuzivisa zvakavanzika zveMagwaro – kuguma kosvika.
JOHANE 4:39 Zvino vaSamaria vazhinji veguta iro vakatenda kwaari neshoko romukadzi wakapupura, achiti: Wandivudza zvose zvandakaita.
Akaziva Jesu saMessiasi nekuti aive amuudza ndangariro dzake nezvaaive aita muhupenyu hwake.
Kuzivisa zvaive mundangariro dzevanhu kwaive kwamboratidzirwa kumaJuda Jesu paakataura naNatanaeri muGarerea.
Zvino kuziviswa kwendangariro dzake kwakaratidzirwa kuvaSamaria vaive chikamu maJuda chikamu maHedeni.
Kuziviswa kwendangariro dzevanhu uku kwakabatsira vose maJuda nevaSamaria kuti vatende, sezvo chaive chiratidzo chaMessiasi.
Izvi zvakavagadzirira kupinda munguva yekereke yekutanga yaive pedyo kutanga maJuda pavakaramba Jesu, vakaita kuti Mwari atendeukire kumaHedeni.
JOHANE 4:40 Zvino vaSamaria vakati vachisvika kwaari, vakamunyengetera kuti agare navo; akagarapo mazuva maviri.
Jesu aiteya nheyo kwavari dzaitsanangura nguva nomwe dzekereke. Nguva nomwe dzekereke dzaizoita makore 2000, kubva pakutangwa kwekereke yekutanga nevapostora, kusvika pakukohwa kwekupedzisira kana kukwira kudenga kunosangana naShe kumakore. Kwemakore 2000 Jesu aizofamba pakati pekereke yake, yaimiririrwa nechigadziko chemwenje minomwe. Munguva yaMwari aya mazuva maviri, sezvo Mwari achiona makore chiuru ekuverenga kwedu isu vanhu sezuva rimwechete. Saka Jesu aifara kuita mazuva maviri ari pavari.
Boka rimwechete, vaHedeni, raive risina kuziviswa kuchiratidzo chaMessiasi. Saka hazvizoshamisi kuti Mwari asimudze muprofita wenguva yekupedzisira kuvaHedeni kuti atidzorere kudzidziso dzevapostora dzekutanga. Anozofanirawo kuratidzira kuziviswa kwendangariro kuvaHedeni.
JOHANE 4:41 Navamwe vazhinji vakatenda neshoko rake.
Vanhu vakafadzwa nezvakataurwa nemukadzi (kereke) pamusoro paJesu. Asi vakazofadzwa zvakanyanya pavakaterera Jesu achitaura. Jesu ndiye Shoko raMwari. Saka maKristu vanoita sevanovimba nezvinotaurwa nekereke pamusoro paJesu, vodzidza zvikamu zveBhaibheri zvinoparidzwa kubva kwazviri nekereke. Asi vanozofadzwa zvakanyanya kana vakatanga kudzidza Bhaibheri pachavo, pachinzvimbo chekugarovimba nezvinotaurwa nevamwe vanhu pamusoro peBhaibheri. “Vanoenda kumakereke” vanongotevedzera kunge shiri yeparoti zvinotaurwa nemapasita avo, nekudaro vanoziva zvishoma kwazvo pamusoro pezvakanyorwa muBhaibheri.
JOHANE 4:42 Vakati kumukadzi: Hatichatendi nokureva kwako; tazvinzwira timene, tinoziva kuti uyu ndiye Kristu Muponesi wenyika zvirokwazvo.
Ichi ndicho chinhu chakakosha. Munofanira kutenda kuna Jesu uye kudzidza Bhaibheri pachenyu. Kwete nekuti pasita vataura izvozvo. Munofanira kuzvipira, kuva nehukama hwenyu naJesu pachenyu, husina chekuita nechero kereke. Vanhu ava vaive vadzidza chokwadi chakakosha. Kuzviverengera Bhaibheri pachavo kwakaita kuti kutenda munaJesu kuve nechirevo chikuru kwavari pachinzvimbo chekutenda muna Jesu nekuda kwezvinotaurwa nevaparidzi. Tinofanira kuva nehukama naJesu pachedu hunobva pakunzwisisa Magwaro akanyorwa. Vanoenda kumakereke nhasi vanofuratira nekunyenyeredza Magwaro akaoma nekuti havazvifungiri pachavo. Vanongotevedzera nehusimbe zvakabatwa paitaura vamwe vanhu, vachinyenyeredza mibvunzo yakaoma vachiti haina maturo. Vanovimba nevanhu vanotungamirira kuti vavafungire, voisirwa miganhu mune zvimwe zvinhu nekuti vatungamiri ivavo havazivi pamusoro pezvinhu izvozvo. Vanobva vasungirwa kudzokorora kukanganisa kwevakuru vavo. Saka vanobva vazviisa kure naShe wavo. Vanhu havana kudzidziswa kutenda kuBhaibheri nekuzvipira kwavo. Saka havana hukama kana ruwadzano neChokwadi sezvakaitwa naJakobo paakarwa naMwari.
Yanano yedu inofanira kuva naJesu amene. Kwete kuenda pachinzvimbo chepiri payanano zvichibva nekunapasita.
JOHANE 4:43 Mazuva maviri akati apfuvura, akabvapo akaenda Garirea.
JOHANE 4:44 Nokuti Jesu amene wakapupura, kuti muporofita haakudzwi munyika yake.
Nekuda kwezvikonzero zvinoita sekuti muprofita haakosheswe mumusha make. Uku ndiko kukundikana kusingajairiki kuri mumafungiro evanhu. Jesu aive chigumbuso kuvatungamiri vezvitendero murudo rwavo rwesimba nemari. Vanoenda kukereke vakadzungaira kwazvo pakutenda vatungamiri vemakereke avo kudarika kutenda kwavanoita Magwaro. Vatungamiri vechiJuda vakakunda kukurudzira maJuda kuti varoverere Jesu. Vatungamiri vezvitendero ndivo vaive zvikonzero zvikuru nei maJuda akaramba Jesu paKuuya kwake kwekutanga. Vafundisi vemakereke ndivo vachava zvikonzero zvikuru nei vanoenda kumakereke vacharamba Shoko raMwari rakaziviswa paKuuya kwake kwechipiri.
Dai maJuda asina kuita nguva refu vachiterera vatungamiri vechiJuda, vakaita nguva refu vachiverenga Testamente Yekare muMagwaro aitaura hushumiri hwaJesu, vangadai vasina kuita kutadza kukuru kwakadaro.
Dai maKristu asina kunyanya kuda kudzokorora zvavakabata paitaura vatungamiri vemakereke, vakaita nguva refu vachinzvera Magwaro pachavo, ipapo isu sevanhu vakazvimiririra tingadai tiine ruwadzano rwepedyo kwazvo naJesu. Ruwadzano rwedu naJesu rwakasimba seruwadzano rwatinarwo nechokwadi cheBhaibheri, nekuti Jesu ndiye Chokwadi. Kana tikati vhesi reBhaibheri rakatiomera harina kukosha, tinenge tichiti chimwe chikamu chaJesu hachina kukosha. Zvinoreva kuti tinenge tisina ruwadzano rwakadzama naye. Zvese pamusoro pake zvinofanira kukosha kwatiri.
JOHANE 4:45 Zvino wakati achisvika Garirea, vaGarirea vakamugamuchira, nokuti vakanga vavona zvose zvaakaita Jerusarema pamutambo, nokuti naivo vakanga vaenda vo kumutambo.
MaJuda muGarerea vaifadzwa kwazvo naJesu. SemaJuda vakaenda kumutambo wePaseka kuJerusarema kuTembere vakaona Jesu achibata basa. Vakanga vaona kuti aive Munhu pakati pevanhu. Asi havana kuvaka hukama naJesu. Havana kumutora nekumuita musoro wavo. Vakatora nzira iri nyore yehusimbe hwavo vakangoterera semapofu zvese zvavaiudzwa nevatungamiri vezvitendero zvavo. MaJuda aya vangadai vasina kumhura Jesu pakupedzisira dai vasina kuterera zvavakaudzwa nevatungamiri vezvitendero zvavo. Vatungamiri vavo, vaifanira kuva vachigadzirira maJuda kuti vagamuchire Messiasi wavo, ndivo vanhu vakafuratidza maJuda kuna Messiasi wavo. Hutungamiri hwevanhu muzvitendero hwakaipa kwazvo. Rudo rwevatungamiri chairwo rwuri pamari nesimba. Kunyengera kwakatangira pamupostora Judasi. Kukanganisa kunotangira kumusoro soro mukereke, kwete kunze kwekereke.
Jesu akasvika paKana kwaakaita munana wake wekutanga pamuchato, akashandura mvura kuiita waini. Munana wake wekupedzisira uchave kugadzirira muchato weGwaiana kuDenga, paachashandura zvakavanzika zvemvura dzeShoko kuita waini yekusimudzwa kwezaruriro paanozivisa Shoko rakanyorwa kuMwenga wake wenguva yekupedzisira, asati ashandura miviri yavo inowora kuti ifuge kusavora.
Apa Jesu aida kuzivisa chimwe chinhu chemunana wenguva yekupedzisira chekugadzirira Mwenga kuMutambo weMuchato kuDenga.
Baba vaive munhu anonzwisisa – munhu anonzwisisa. Chii chinoita kuti munhu anzwisise? Vakagamuchira Shoko raMwari nekuda kwavo vakarinzvera neMagwaro akanyorwa kuti vave nechokwadi chekuti chaive chokwadi.
MABASA 17:11 Ava vakanga vachinzwisisa kukunda veTesaronika, vakagamuchira shoko nomwoyo wose, vachinzvera Magwaro zuva rimwe nerimwe, kana zvinhu izvozvo zviri izvo.
JOHANE 4:47 Iye wakati achinzwa kuti Jesu wabva Judea, wasvika Garirea, akaenda kwaari, akamunyengetera kuti aburuke kundoporesa mwanakomana wake; nokuti wakanga wotandadza.
Ichi chaive chiratidzo chababa nemwanakomana. Baba vainzwisisa, senguva yekereke yekutanga vatendi vaive paBerea.
Chinhu chikuru panguva yekupedzisira muprofita achazivisa zvakavanzika zveMagwaro panguva yekupedzisira, odzosera vana venguva yekupedzisira kuchokwadi chemadzibaba avo mapostora vainzwisisa.
MATEO 17:11 Akapindura, (Jesu) akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Kutuka ndiko kugara panzvimbo kwekuita kwebhomba renyukiriya richaputika munguva yeKutambudzika kukuru.
Asi nguva yekutambudzika isati yasvika, vana vanofanira kuva vadzorerwa kumadzibaba avo.
Saka mwana anorwara asina chaanogona kuzviitira anofanira kudzorerwa kuhutano hwakanaka hwababa vake, munhu anonzwisisa.
Nguva yekereke yekupedzisira inorwara nehutungamiri hwevanhu nekereke yaita kuti vanoenda kumakereke vatende mukutadza, tsika uye mazano evanhu.
JOHANE 4:48 Zvino Jesu akati kwaari: Kana musingavoni zviratidzo nezvishamiso, hamungatongotendi
Dambudzoko guru nemaKristu anhasi nderekuti vanotarisira zviratidzo nezvishamiso sezvakakosha kudarika kunzwisisa Magwaro. Kana vakaona chishamiso vanenge vawana kurudziro.
JOHANE 20:27 Ipapo akati kunaTomasi: Vuya pano nomunwe wako, uvone zvanza zvangu; vuya noruvoko rwako, uruise murutivi rwangu, usava usingatendi, asi unotenda.
29 Jesu akati kwaari: Tomasi watenda, nokuti wandivona? Vakaropafadzwa vanotenda, kunyange vasina-kuvona.
Zvishamiso zvinokwanisa kubereka kutenda. Asi kutenda kuri nani kunoberekwa mune vaya vasina kubvira vaona zvishamiso nekuti kutenda kunovakwa kubva pakutenda Shoko raMwari. Kutenda hakubvi pakuona zvishamiso.
Vamwe vanhu vasina kana kutendeuka vanokwanisa kuita zvishamiso. Gidioni akaterera hope dzakaturikirwa nemiromo yemapegani maviri.
MATEO 7:22 Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe hatina kuporofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here?
JOHANE 4:50 Jesu akati kwaari: Enda hako, mwanakomana wako mupenyu. Munhu uyu akatenda shoko rakarebwa naJesu kwaari, akaenda.
"Munhu uyu akatenda shoko rakarebwa naJesu kwaari, ": Ndiyo yaive kiyi yekubudirira kwake. Ndiko kwaive kuita kwababa vechipostora vakatarisana neShoko raJesu.
JOHANE 4:51 Wakati vachaburuka, varanda vake vakasongana naye, vakati: Mwana wenyu mupenyu.
Mwanakomana, ari kure, aive aponeswa.
JOHANE 4:52 Zvino akavabvunza nguva yaakatanga kunaya nayo. Vakati kwaari: Zuro nenguva yechinomwe fivhiri yakabva kwaari
Awa rechinomwe mucherechedzo wenguva yekereke yechinomwe apo vana venguva yekupedzisira vanoponeswa kubva mukusatenda kwavo kukuru kwavakawana mumakereke avo, saka vanobva vadzoserwa pakutenda kweTestamente Itsva yakanyorwa nemadzibaba mapostora.
JOHANE 4:53 Zvino baba vakaziva kuti ndiyo nguva Jesu yaakati kwaari: Mwanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose.
Jesu akapa Shoko rake kumadzibaba ekereke yekutanga. Isu sevana tiri kure munguva uye nzvimbo nekereke yekutanga, asi Jesu ari kure, anogona kuponesa kutenda kwedu otiita kuti titende sezvakaitwa nekereke yekutanga. Jesu anoshanda nababa nemwanakomana panguva imwechete. Mumashure merumuko nguva yekereke yekutanga ichaonekwa kana kushanyira vatsvene vanorarama venguva yechinomwe, vachabvumirana kana kuona zvakafanana padzidziso. Zvino kana miviri yeMwenga anorarama yashandurwa, vose vanokwira kudenga pamwechete.
JOHANE 4:54 Ichi ndicho chiratidzo chechipiri chakaitwa naJesu, abva Judea, asvika Garirea.
Pakutanga kwehushumiri hwake akaita mucherechedzo wechishamiso chaachaita pakupedzisira kwenguva dzemakereke. Chishamiso chekutanga nechekupedzisira. Mwari asingashanduki ndiye Arfa neOmega , Kutanga nekuguma. Kristu anogara akadaro zuro, nhasi nekusingaperi.